Vakinankaratra: najoro ny kaoperativa ho an’ireo mpamboly ovy | NewsMada
Vakinankaratra: najoro ny kaoperativa ho an’ireo mpamboly ovy
Avy any amin’ny faritra Vakinankaratra ny 80 %-n’ny vokatra ovy eto Madagasikara, indrindra avy ao amin’ny distrikan’i Betafo. Na izany aza, mbola azo lazaina ho tsy mahafehy io seha-pihariana iray io ny any an-toerana, manomboka any amin’ny fambolena hatrany amin’ny lalam-barotra. Olana voalohany, mitombo hatrany ny aretina mahazo io karazam-boly io. Noho izany, ilaina ny tohana teknika sy ny fampiasana masomboly vaovao, hatrany amin’ny tany volena, mila fanadihadiana avokoa.
Ho fikajiana ity karazam-boly ity, najoro any Vakinankaratra ny kaoperativa Tafomiavo, iombonan’ny mpamokatra ovy any an-toerana. Hahamatihanina izany seha-pihariana izany, nasiana filankevi-pitantanana io kaoperativa io hitantana azy, mametraka lasitra sy vina hampitomboana ny vokatra sy hanatsarana ny kalitao, miainga avy amin’ny masomboly vaovao. Antsoina manampy momba izany masomboly izany ny Fiompiana fambolena malagasy norvezianina (Fifamanor). Tanjon’ny kaoperativa Tafomiavo ny fanatsarana ny fari-piainan’ny tantsaha mpamboly ovy any Vakinankaratra.
Manan-danja lehibe eo amin’ny sakafo ny ovy, anisan’ny foto-tsakafo manampy ny vary, indrindra amin’ny fotoan’ny maitsoahitra. Azo volena amin’ny fotoana rehetra koa ny ovy : fahavaratra, oktobra hatramin’ny febroary ; anelanelam-potoana, febroary hatramin’ny avrily na mey; azo volena eny an-tanimbary aorian’ny fiakaran’ny voka-bary ny volana jona hatramin’ny septambra.
Fa amin’ny fotoan’ny maitsoahitra ny ankamaroan’ny tantsaha mamboly azy satria tsy sarotra raha mandritra ny fahavaratra sy miaro azy amin’ny aretina. Noho izany, tokony ho fidiram-bola lehibe ho an’ny tantsaha izany raha voafehy tsara. Hatramin’izao aloha, tombanana ho 500 000 t isan-taona ny vokatra.